Ithegi: Ukuthengisa nge-imeyile | Martech Zone
Ithegi: Ukuthengisa nge-imeyile
Ungazondla njani iiPosti zakho zeBlog yeWordPress ngeTag kwitemplate yakho yeActiveCampaign
NgoMvulo, Aprili 11, 2022 NgoMvulo, Aprili 11, 2022 Douglas Karr
Sisebenza ekwandiseni ezinye iihambo ze-imeyile zomthengi okhuthaza iintlobo ezininzi zeemveliso kwindawo yabo ye-WordPress. Isifanekiso ngasinye se-imeyile ye-ActiveCampaign esiyakhayo silungiselelwe kakhulu kwimveliso esiyikhuthazayo kunye nokubonelela ngomxholo. Kunokuba ubhale kwakhona uninzi lomxholo osele uveliswe kakuhle kwaye ufomatiwe kwisiza seWordPress, sidibanise ibhlog yabo kwiitemplate zabo ze-imeyile. Nangona kunjalo, ibhlog yabo ibandakanya iimveliso ezininzi ngenxa yoko kuye kwafuneka
IiNdlela ezi-6 eziNgcono kakhulu zoKwandisa iMbuyiselo kuTyalo-mali (i-ROI) yeNtengiso ye-imeyile yakho
NgoMvulo, Aprili 4, 2022 NgoMvulo, Aprili 4, 2022 UVladislav Podolyako
Xa ukhangela umjelo wokuthengisa onembuyekezo ezinzileyo kwaye eqikelelwayo kutyalo-mali, awujongi ngaphaya kokuthengisa nge-imeyile. Ngaphandle kokulawulwa kakhulu, ikwabuyisela i-42 yeedola kwi-1 yeedola nganye echithwe kumaphulo. Oku kuthetha ukuba i-ROI ebaliweyo yokuthengisa i-imeyile inokufikelela ubuncinane kwi-4200%. Kule posi yebhlog, siya kukunceda uqonde indlela i-imeyile yakho yokuthengisa i-ROI isebenza ngayo- kunye nendlela yokwenza ukuba isebenze ngcono.